:: My Little World ::: Google Buzz 101
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးပါ အမ ညီမလဲ Buzz ကိုမကြိုက်ဘူး :)
ကျေးဇူး နေနေ.. ဂူးဂဲ ကြီးကို ယုံမိ လို့ မပုံအပ် မိအောင် နေမှပဲ..း)
ဖေ့ဘွတ်က တမျိုး. ဂျီတော့က တမျိုး..အခု ဘဇ်.. အလုပ်လုပ်ချိန်ရော ရှိပါဦး မလားးး
Friday, February 12, 2010 2:12:00 PM
မနေနေနိုင်ဘလော့က ဒီအကြောင်းလေးကို လင့်နဲ့တကွ ကျနော့်ဘလော့မှာ ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။ခွင့်ပြုပါနော်.
Friday, February 12, 2010 8:12:00 PM
တို့လဲမကြိုက်ဘူး turn off လုပ်လိုက်ဘီ။
Saturday, February 13, 2010 12:40:00 AM
Thank you for Buzz info...
I am thinking to turn off it. :))
Sunday, February 14, 2010 10:56:00 PM